မြန်မာသံတော်ဆင့်: ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ နှင့် အောင်ဆန်းစုကြည် ကို Endorse မလုပ်နိုင်တော့သူများ
Ye Wint February 15, 2012 at 12:48 AM
Good review. Saying very piratical way, optimistic, realism.
Unknown March 3, 2012 at 3:52 PM
Well thoughts and comprehensive, agree, Myanmar still needs Daw Suu for moving thing forward. There are some issues Myanmar needapopular figure to make some compromise for stepping up for next step. Complex issues like ethic cases, Myanmar need Daw Suu to bring all together to sacrifice our ego for the sate of the country's peace-process and national reconciliation. We need some body like Daw Suu for these difficult and challenge tasks. UDP-Myanmar
Soe Tun March 8, 2012 at 1:52 AM
အင်မတန် ကောင်းမွန်တဲ့ ပြန်လည် ဖြေရှင်းချက်ပါ။ အတိအကျ သဘောတူ ထောက်ခံပါတယ်။
တစ်ချို့တစ်ချို့သော သူတွေက အရည်အချင်းနဲ့ အရေအတွက်ကို ခုချိန်ထိ စိုးရိမ်စိတ် လွန်ကဲပြီး ကွဲကွဲပြားပြား လက်မခံနိုင်ကြသေးတာကြောင့် “ဘာကိုပြင်မှာလဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါး ထွက်ပေါ်လာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် သိသိသာသာ မြင်ရတဲ့ ရလဒ်နဲ့ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဥာဏ်နဲ့ကြည့်ရင် မြင်ရတဲ့ ရလဒ်တွေကို မြင်နိုင်အောင် ကြည့်ကြပါလို့ပဲ အကြံပြုရင်း မိမိတို့ လုပ်စရာရှိတဲ့ ကိစ္စများကိုလည်း သေးသေးကြီးကြီး ကူညီလုပ်ဆောင်ကြဖို့ တိုက်တွန်း နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။
Nanda March 9, 2012 at 9:26 AM
ကောင်းမွန်သင့်လျော်တဲ့ သုံးသပ်ချက်ပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာလို့ ဒီလမ်းကြောင်းကိုရွေးသလဲဆိုတာ ကျုပ်သဘောပေါက်ထားတဲ့ အချက်ကို စာရေးသူပြတဲ့ ကွန်ချက်တွေက ပိုမိုခိုင်မာစေပါတယ်။ အဲဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ဖူးပါတယ်။ Literally defined postulate တွေကို ပဲ မှန်အောင် အသားပေးပြီးအတင်းဆွဲသုံးသပ်ထားတာတွေကို မြင်မိပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်က ရေရှည်နိုင်ငံရေးမှာ စစ်တပ်ရဲ့ပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍဟာ ပြသနာဖြစ်သော်လည်း ရေတို၊ အသွင်ပြောင်း တည်ဆောက်ဆဲကာလမှာ တတိုင်းပြည်လုံး ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဆင်းရဲမွဲတွေမှုပပျောက်သက်သာရေးနဲ့ rule of law တို့ဟာ လက်ငင်းဦးစားပေးရမယ့်အရာတွေဖြစ်လို့ ဒီလိုလမ်းကြောင်းကို သွားနေတယ်လို့ ကျနော့အနေနဲ့ သဘောပေါက်ထားပါတယ်။
တက်လူ April 14, 2012 at 9:29 PM
I would like to know the changes after NLD is coming out from 1993 National Assembly. It would be more understanding of the other stakeholders (10% of Democratic and Ethnic Leaders in political fields according to your article.)